Waxay ahayd wax lagu farxo inaan noqdo rakaabkii ugu horreeyay ee taraamka… | RayHaber | raillynews
HomeHAY'ADAHAAkçarayWaxay ku fiicnayd inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee taraamka Tram
27 / 03 / 2017 Akçaray, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, HAY'ADAHA, TURKEY, taraamka
Marag kacaya taariikhdu waa mudnaan muhiim ah…
Waxaa had iyo jeer looga hadli doonaa jiilalka soo socda…
Mar waxaa jiray jid tareen oo ka gudbaya bartamaha magaalada Izmit.
Aragtida nostalgic waxay ahayd mid qurux badan…
Laakiin Izmit wuxuu korayay oo korayay maalin kasta. Wadada tareenka ee dhex marta bartamaha magaalada ma aheyn dhibaato. Waxay ahayd dhibaato xagga socodka gaadiidka. Sidoo kale, haddii aysan maalin walba ahayn, ugu yaraan hal ama laba qof ayaa ku dhinta doonta hoostiisa oo ku dhinta.
Sannadihii 1990, waxaan sameeyay war badan oo ku saabsan maydadka aadanaha ee lagu kala jeexjeexay tareenka bartamaha magaalada…
Qaadista khadka tareenka ee qaybta xeebta ee sannadihii 90'li wuxuu bilaabay inuu aad u hadlo.
Maanta, waxaan ka hadalnaa shaqada taraamka ee bartamaha magaalada ku dhawaad ​​maalin kasta waxaan ka wada hadalnaa in khadka tareenka loo geyn doono xeebta waqtigaas oo aan sii wadno wararka.
Bilowgii sannadihii 1990, taraafikada ayaa lagu rakibay aagga xeebta.
Dhamaadka 1990, khadka tareenka ee bartamaha magaalada gebi ahaanba waa laga saaray.
Urur ayaa loo habeeyey si uu uga marag furo taariikhda ka hor inta aan xadhigaha laga tuurin.
Ajandaha hore ee howlaha la socda hawlihii mudada uu socday Ururka Da 'yarta Kocaeli, borotokoolka magaalada ee xirmooyinka maalin ka hor sawirka xusuusta ee laga qaaday biraha ...
Waxaan joogay halkaas sawirkaa la qaaday si aan ugu marag furo taariikhda…
Xusuus muhiim ii ah…
Sawirkaas guriga ayaan ku hayaa…
Maalintii labaad waxaan goob joog u ahaa taariikhda Önceki
Taraamka, taraafikada Izmit, ayaa laga sheegay magaaladan sanado badan.
1990'li Sefa Sirmen waxaa la soo korsaday muddadan. Si kastaba ha noqotee, sanado badan kadib, ma jirin dowlad hoose oo fulin karta mashruuca taraamka.
Dhismaha mashruuca tareenka waxaa lasiiyay İbrahim Karaosmanoğlu, Duqa Magaalada Kobaneli Magaalo Weyn ee AK Party…
Waa mashruuc aad muhiim u ah.
Sanado badan ka hor mashaariicda taraamyada waxay ku soo noolaayeen qaar ka mid ah wadamada Yurub iyo xitaa magaalooyinka qaar ee dalkeenna.
Waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee gobolkeenna.
Karaosmanoğlu iyo kooxdiisu waxay dhawreen yaboohkoodii ku saabsan xulashada maxalliga ah ee 2014 waxayna hirgaliyeen mashruuca ka gudubka khadka tareenka ee xadka kiloomitir 7.2 ee u dhexeeya SEKA Park iyo xarunta basaska.
Howsha ayaa dardar gelisay isla markiiba doorashada kadib.
Ma fududa in la xaqiijiyo mashruuca taraamka…
Dhibaatooyinka laga yaabo inay ku dhacaan wadada laynku ka gudbi doono. Waxaa jiray dhibaatooyin lama filaan ah…
Kaabayaashu waxay qaadatay waqti dheer in la soo gabagabeeyo markii aan nidhi camal dhisme.
Xitaa mashruuca laguma dhameeyo wakhtiga loo cayimay
Maalintii hore, 23 Maarso, waa taariikh muhiim u ah 2017 Izmit…
Taariikhda markay shaqooyinka bilaabeen taraamku ay yimaadeen heerkii ugu dambeeyay…
Tijaabada “BAARITAANKA BAADHITAANKA” waa la qabtay…
Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay abaabushay “BAARITAANKA KHUDBADA“…
Si loo muujiyo in shaqooyinka taraamka aan wali la dhammaystirin, ayaa wargeysku ku casuumay tifaftiraha guud ee madaxa in ay ka soo qaybgalaan dhacdada si ay u markhaati furaan taariikhdan.
Waxaa nalagu casuumay inaan noqono tafatireyaasha Wargeys Mavi Kocaeli, Özgür Kocaeli Wargeys, Newsağdaş Wargayska Kocaeli, Büyük Kocaeli Joornaalada iyo Wargeyska Bizim Yaka.
Waxaan goob joog u ahaa tijaabadii ugu horreysay ee taariikhi ah ee taraamka.
Waxaan goobjoog u ahaa taariikhda markii labaad…
Horumar muhiim ah iyo sharaf leh aniga…
Mashruuca taraamka, oo ku kici doona 200 milyan ginni, ayaa la dhaleeceeyey oo in badan la hadlay…
Maahan mashruuca taraamka oo sidaa loo hadlay oo laga falceliyay. Dhibaatooyinka ka soo baxa gobollada ay mashruuca taraamku ge goes geystaan
Markay shaqooyinku bilaabeen badhtamaha magaalada, baayacmushtariyadiina way xumaadeen khadadka taraafikada maalin walbana waa la beddelaa…
Dadku xitaa lug kuma socon karaan bartamaha magaalada…
Mashruuca taraafikada ee sababay dhibaatooyin lama filaan ah, lama filaan ah iyo dhibaatooyin lama filaan ah Hiç
Dabcan, wargeysyada maxalliga ah waxay u soo gudbiyeen dhibaatooyinkaas bogagga wargeysyada maalin kasta maalin kasta waxayna sameeyaan warar.
Dawlada Hoose ee Magaalada ayaa lagu dhalleeceeyaa dhibaatooyinka ka dhalan kara mashruuca tareenka…
Waxaa jiray hal qof oo lahaa dhammaan dhaleeceynkan göğüs
Xoghayaha Guud TAHİR BÜYÜKAKIN…
Had iyo jeer wuxuu helay dib u eegis macquul ah. Dhex galay…
Wuxuu sameeyay dadaalo ka sareeya sidii aad u yareyn laheyd dhibaatooyinka oo uu wali sameeyo.
Mar kasta oo aan uga waco taraamka, waqtiga aan u wacayo, wuxuu ka jawaabayaa taleefankiisa marwalbana wuu iga jawaabayaa su'aalahayga.
Had iyo jeer wuu iiga jawaabayaa su'aalahayga oo wuxuu iga celiyaa sharraxaad hep
Kabtankii tijaabada ee aan sameynay maalintii hore, midka ugu farxadda badan uguna xiisaha badana wuxuu ahaa tareenka BÜYÜKAKIN.
Mashruuca taraamka "tram" waxaa la keenay Izmit oo uu hoos imaado gudoomiyaha ofbrahim Karaosmanoğlu.
Mashruucan waxaa lagu qori doonaa bogagga taariikhda.
Faahfaahin muhiim ah oo magaalada…
Madaxweyne Karaosmanoğlu, "Vatmanlık" ayaa laga sameeyay wadista imtixaanka. Markaa wuxuu galay qolka koontaroolka oo wuxuu u shaqeeyay darawal taraam ah…
Anaga, suxufiyiin iyo maareeyayaasha sare ee dawlada hoose ee ku nool waxaan fadhinay kuraasteennii ku taal xarkaha taraamka…
Duqa Magaalada Karaosmanoğlu ayaa yidhi “Bismillah bast oo riix batoonka oo bilaabay taraamka…
Waxaan ka degnay barta laga bilaabo barta baska.
Waxay ahayd gaabis. Ku raaxaysashada ayaa ku xanta
Maaddaama ay ahayd waddo tijaabo ah, waxaa jiray cilado yar oo dariiqa aan weli dhammaan. Tusaale ahaan, ma jiraan wax joogsiyo ah weli.
Khadadku waa cusub yihiin oo meelna ma jiraan, weli waxaa jira wada-hawlgalayaal dhismaha bidix iyo midig ee khadadka. Waxaa jira shaqo badan oo aan wali la qaban wadada dhexdeeda…
Taas waxaan ku dareemay guriga dhexdiisa. Taraamku wuxuu u liitaa sida saliida yağ
Ma jirin wax gubasho ah ... Markaa biraha la sudhay xisaabinta milimitirka ...
Markii aan fiiriyey bannaanka qolka dhexdiisa waxaa ku sugnaa dad muwaadiniin ah. Waxay daawanayeen marinka tareenka. Waxaan sidoo kale arkay dhawr sacabinaya oo gacmaha dhaqaaqaya ...
Ku safridda baska waa dariiqo kale oo lagu raaco taraamka.
Maaddaama khadka oo dhami uusan weli dhammaan, waxaan ku safray inta u dhexeysa boosteejada baska iyo Anıtpark, halkaas oo aan ku aragnay goobteenna tijaabada ah
Waa la dhaleeceeyay oo in badan ayuu la hadlay…
Dhaleecaynta ganacsatada iyo dadka dhibbanayaashu intii ay ku jireen hawshu waxay ka careysiyeen maamulayaasha maxalliga ah…
Laakiin markii khadka tareenka gebi ahaanba la dhammeeyo, jidadka soo maro khadka ayaa la nadiifiyaa, cilladaha waa la tirtirayaa, joogsiyada ayaa la sameeyaa, oo qabanqaabiyaasha baabuurta waxaa lagu sameeyaa dhinaca midig iyo bidix ee khadka, sawir muuqaal dhameystiran ayaa soo bixi doona…
Markaas taraamyada ayaa si iskood ah u wada shaqeyn doona…
Dadka reer Izmit waxay la kulmeen "ciqaab aad u badan intii lagu gudajiray socodkii socodka, laakiin intaas kadib waxay la kulmi doonaan farxad weyn ……
Ku safridda taraamka waa ka aamin san tahay, ka nadiifsan tahay waana ka raaxo badan tahay basaska…
Intii lagu jiray safarka, waxaan xog ka helnay xoghayaha guud TAHİR BÜYÜKAKIN, oo ah magaca culeyska ugu weyn ee mashruucan…
Khadka tareenka ee dhex mari doona inta udhaxeysa SEKA Park-Bus Station waa wadarta xNUMX kilomitir…
14 kun oo rakaab ah maalin walba khadadkaan waxaa loogu talagalay in lagu qaado. Si kastaba ha ahaatee, Mashruucan ayaa loo qorsheeyay iyada oo loo eegayo 2035 iyo 50 waxaa loogu talagalay in lagu qaado rakaab si ay rafcaan ugu noqoto kun rakaab ah…
Waxaa jira xariiq 11 ah oo khadka kujira. Waxaa jira xero xNUMX ah oo udhaxeysa Xarunta Saldhigga Baska Imtixaanka iyo Anıtpark.
Magaca xaraashka ayaa la sheegay in lagu dhawaaqi doono marka taraamku soo dhowaado joogsiga. Waxaan joogsaneynaa meel aan joogsi lahayn illaa Anitpark
16 ayaa yimid daqiiqado.
Haddii aan xisaabinno in taraamku istaago hal ama badh daqiiqad kasta joogsi kasta. Tani waxay sameyneysaa ugu dhawaan daqiiqadaha 25…
Haddii aad isku daydo inaad bas ku raacdo inta u dhexeysa boosteejada Baska iyo SEKA parking ahaan, haddii aad xisaabiso taraafikada, waxaad u dhowaan doontaa saacad iyo badh. Gawaarida taraamku waxay soo socdaan qiyaastii 35 daqiiqo…
Gawaarida xamuulka ee 12 buuxa ayaa ka shaqeyn doona khadka taraamka. Gaadhi kasta waa dhererkiisu yahay mitir 33 dhererkiisuna yahay dhererka rakaabka waa qof 294 qof, iyo rakaabka 240 wuxuu awood u leeyahay inuu ku socdo ayakta
Nevzat Doğan aad ayuu u fiicnaa…
Duqa Magaalada Tram ee Izmit Nevzat Dogan wuxuu ka qeyb galay barnaamijka “TEST DRIVING” İzmit
Dogan, si kastaba ha ahaatee, kuma uusan qaadin taraamka saldhigga baska annaga oo kale ah. Ibrahim Karaosmanoglu, Duqa Magaalada Vatapoli, Dogan wuxuu ka qabtay xaafada Yahya Kaptan.
Dogan wuxuu ahaa nin faraxsan oo faraxsan
Dogan oo ka qeybqaatey barnaamij kasta nus saac iyo saacad aakhirkoodna dib dambe looma aqbalin, Dogan kama uusan qeybgalin barnaamijkaan waqtigiisa.
Ku dhashay in la raaco taraamka wuxuu ahaa mid wanaagsan oo faraxsan…
Wuxuu bilaabay kaftanka bidix iyo midig…
Wuxuu la hadlay Karaosmanoğlu, oo ahaa reer Vatican, wuxuuna salaamay weriyeyaasha gadaashiisa tareenka.
Waa xaqiiqo in mashruuca taraamka laga dhisayo Izmit. Dhibaato fara badan ayaa ka jirtay mashruuca taraamka ee Izmit iyaduna wali waxay ku jirtaa hoolka. Markii dhibaatooyinkii soo maray ay noqdeen magaaladii Do'an mas'uul ka ahayd, Do'an badiyaa waxaa lala kulma dadweynaha.
Laakiin markasta oo uu kubada ku tuuro Dawlada Hoose ee Magaalada, “Mashruucani ma ahan. Dhibaatadan iyo silicaas ayaa masuul ka ah magaaladii ”uu kubad tuurayay Magaala-weynta…
Si kastaba ha noqotee, raacista doomaha Dogan, ayaa bayaan u siisay weriyeyaasha inay ku soo noqdeen nasasho. “Waxaan ballan qaadnay ballanqaad uu u hadlay sida inuu mashruucu isagu iska leeyahay…
Intii Dogan uu hadlayay, annaga iyo qaar ka mid ah maareeyayaasha Dawlada Hoose ee Magaalada ayaan ku qanacnay hadaladaas. Kara Hadaladan waa in uu sameeyaa Madaxweyne Karaosmanoğlu, Dogan wuxuu sameynayaa bayaanka waajibaadka, "waxay ku jawaabeen iyagoo yiri…
Waxaan u maleynayaa in Dogan uu qalad ku sameeyay halkaan. Wuxuu iska dhigay inuu fuliyo mashruuca…
Wuxuu u sheegay suxufiyiinta, ee ha i weydiinin wax sharraxaad ah. Qaabdhismeedka mashruucan waa Dowlada Hoose ee Magaalooyinka. Faahfaahin ka hel Duqa Magaaladeena bilir
Waxay ahayd xaalad cajiib ah…
Mashruuca taraamku waa mashruuc taariikhi u ah magaaladan. Markii mashruucu dhammaado, waxay shaqo weyn u noqon doontaa Dowladda Hoose ee Magaalada…
Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo qof kasta oo gacan ka gaystay magaalada adına
Waxay ii ahayd daqiiqad taariikhi ah…
Waan ku faraxsanahay ...
Si toos ah ula xiriir Cemalettin
Rakaab ah kuma jiraan Anadolu
Carruurtu waxay noqdeen rakaabkii nidaamka tareenka
Rakaabka ugu horreeya ee basaska cusub ee Izmir ayaa noqday madaxweynaha (Sawir Sawir)
Fakıbaba waxay u safreysaa Singapore si ay u hesho mashruuca gawaarida ee Shanlıurfa
Rakaabka baska ee Japan ayaa keenay dab
Soo bandhigida rakaabka BUDOOS ee taraamyada Istanbul: Ha tagin Kabatas
IMM waxay tiri 'rakaabka metrobus wuxuu la mid yahay dadka Amsterdam'.
Mashruuca Izmit Tram
Mashruuca taraamka ee Kocaeli